अन्नपूर्ण सोमवार, पुस २५, २०७३ 1430 पटक पढिएको
गतवर्षको विनाशकारी भूकम्प र सयौं परकम्प आएयता सरकार प्रमुख तीनपटक फेरिएका छन् । त्यसबेला सत्ताको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालाले भूकम्पपछिका पाँच महिनामा दुईतीनवटा नीतिगत निर्णय लिए । पहिलो, भूकम्प राहत र पुनर्निर्माणको लागि एक द्वार प्रणालीको निर्णय लिए । दोस्रो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन गरे, डा. गोविन्द पोख्रेललाई त्यसको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरे । तेस्रो, उनकै कार्यकालमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले दाताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भेला बोलाए, जहाँ चार अर्ब डलरको सहयोगको आश्वासन मुलुकले पायो, भूकम्पको तीन महिनापछि ।
प्राधिकरणमा विज्ञ र योग्यता अनि पीडितको अवस्था तथा अधिकारप्रति संवेदनशील नेतृत्व आवश्यक छ । दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर यो निर्णय सबै दलहरूले लिने हो भने सम्भवतः त्यो कठिन हुने छैन । तर प्राधिकरण फन्ड नियन्त्रित गर्न र आफ्नो दलको अधीनमा त्यसलाई राख्न प्रपञ्च हुँदासम्म प्राधिकरण एउटा 'साइनबोर्ड' कै रूपमा सीमित रहिरहनेछ । पीडित जनताले कष्ट भोगि नै रहनेछन् ।
शुभसाइतमा राष्ट्रपतिबाट भाइ डेगेन्द्र पाण्डेलाई टीका प्रदान 7512
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले साइत भन्दा एक घण्टा अगाडि नै टीका लगाए 17932
प्रधानमन्त्री देउवाले उत्तम साइतमै टीका लगाए 3691